Fivondronamben'ny Federasiona Ranomasimbe Indiana - ss 2t l1013 lat
Ny teny fikasana lehibe indrindra avy amin'Andriamanitra
Alatsinainy 03 Jona
Vakio ny Hagay 1:12–14. Mariho ny fahatsapana firaisana eo amin’ny tanjona kendrena eto. Nahoana no zava-dehibe tokoa izany mba hahafahan’izy ireo manatanteraka izay nasaina notanterahiny?
Tamin’ity indray mitoraka ity dia nankatò tsy nisy hataka andro ny hafatra nomena azy, ireo mpitarika sy ireo vahoaka sisa. Nataon’izy ireo ny fanomanana, nangonin’izy ireo ny fitaovana nilaina, dia niverina nanao ny asa fananganana ny tempoly izy ireo, telo herinandro taty aoriana. Tao anatin’ny herinandro iray dia nanangana alitara izy ireo ary namerina ny fanompoam-pivavahana fanaterana fanatitra (Ezra 3:1–6). Vita tao anatin’ny dimy taona latsaka kely ny tempoly.
Marina fa tsy azo ampitoviana amin’ny vatan-trano iray azo tsapain-tanana ny fanjakan’Andriamanitra, saingy mampahatsiahy kosa ny bokin’i Hagay fa indraindray Andriamanitra no mampiasa zavatra mivaingana hita maso na azo tsapain-tanana, toy ny trano mba hanatrarana tanjona ara-panahy.
Raha ny fanekena avy hatrany ny hafatra entiny no mamaritra ny fahombiazan’ny mpaminany iray, dia azo lazaina ho anisan’ireo mpaminany nahomby indrindra i Hagay. Nanetsika ny olona hiasa ny toriteniny. Tao anatin’ny iray volana monja dia nitohy ny asa fananganana ny tempoly, ary nanome toky ny olona ireo mpaminanin’Andriamanitra fa hanampy azy ireo Jehôvah.
Voalaza ao amin’ny Hagay 1:12-14 ny fihetsika nasetrin’ireo mpitarika sy ny vahoaka teo anatrehan’ny hafatra nentin’i Hagay. Nankatoa an’i Jehôvah ny olona rehetra satria niaiky izy ireo fa nirahin’Andriamanitra i Hagay. “Natahotra teo anatrehan’i Jehovah” (“natahotra an’i Jehôvah”) (and. 12, NIV) izy ireo, ary nasehony izany tamin’ny fiankohofany Taminy sy tamin’ny fanomezana Azy ny haja mendrika Azy. Noho izany dia afaka nampita teny iray vaovao avy tamin’i Jehôvah amin’izay izao i Hagay: “‘Izaho no momba anareo’” (and. 13). Vantany vao nanapa-kevitra ny hankatò an’i Jehôvah ny vahoaka, dia niova ho teny fampaherezana ireo hafatra nanome tsiny azy ireo. Ny fahazoany antoka ny fanatrehan’Andriamanitra dia nanome azy ireo ny teny fikasana mampanantena ireo fitahiana hafa rehetra. Ny fanambaràna hoe “‘momba anareo Aho’” dia efa teny fikasana araka ny fanekena nataon’Andriamanitra hatramin’ny andron’ireo patriarka sy i Mosesy (Gen. 26:3; Eks. 3:12; Nom. 14:9).
Marina fa ny fanehoana lehibe indrindra ny hoe “amintsika” na “momba antsika” Andriamanitra dia i Jesôsy (jereo ny Isa. 7:14; Mat. 1:23; 28:20). Aza esorina amin’io hevitra io, dia ny amin’i Jesôsy, Ilay Mpahary sy Mpanohana izao tontolo izao, nonina teo amintsika, ny fisaintsainana. Inona no ambaran’izany amintsika mikasika ny maha-sarobidy antsika eo amin’ny tontolo iray izay lehibe dia lehibe tokoa hany ka mora foana amintsika ny hahita ny tenantsika ho tsinontsinona? Ento eo amin’ny kilasy ny valin-teninao amin’ny Sabata.